किन चिलाउँछ पुरुष यौनाङ्ग, यस्तो छ कारण र उपचारको तरिका - Everest Dainik - News from Nepal
किन चिलाउँछ पुरुष यौनाङ्ग, यस्तो छ कारण र उपचारको तरिका
एजेन्सी । यौनसम्पर्क गरेपछि या अरु बेला पनि पुरुष यौनाङ्ग चिलाउने समस्या धेरैले झेलेका हुन्छन् । कतिपयको शिश्नको शीर्ष भागमा चिलाएको हुन्छ भने केहीको चाहिँ अण्डकोषमा यो समस्या देखिन्छ ।
किन चिलाउँछ त शिश्न ?
–लिंगको अगाडिको भागमा सेतो रङको तरल पदार्थ जम्मा हुँदै जान्छ । यसले गर्दा पनि लिंक चिलाउँछ । यस्तो हुनुको कारण लिंगको सफाइमा ध्यान नदिन नै रहेको स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन् ।
याे पनि पढ्नुस यस्ता छन् वीर्यसम्बन्धी पाँच रोचक तथ्य: १७ लिटर स्खलनदेखि मुड जगाउने रसायनसम्म
–एलर्जीः साबुन र कण्डम प्रयोगले गर्दा पनि एलर्जी हुने सम्भवना अध्यधिक हुन्छ ।
–धेरै टाईट कट्टु लगाउँदा पनि यस्तो समस्या हुन्छ
-मूत्रमार्ग संक्रमणले गर्दा पनि लिंगचिलाउने गर्दछ ।
-ढुसी र फंग्सको संक्रमण
यस्ता यौन रोग सक्रमित रोगीलाई पनि लिंग चिलाउने समस्या हुन्छ
लिंग चिलाउने समस्याबाट कसरी मुक्ति पाउने ?
-लिंगमा जोडले साबुनको नलगाउने
-नुहाउने बेला लिंगलाई सधैं सफा गर्ने साथै पिसाप गरिसकेपछि राम्रोसँग धुने
-टाइट कट्टु नलगाउने
-यदि तपाइँलाई एलर्जी हुन्छ भने टेटेक्स कण्डम अथवा लुब्रिकेटको प्रयोग नगर्ने
ट्याग्स: Penis, Sexual health